नयाँ खुलासा ! मुख मात्रै हाइन, कानको माध्यमबाट पनि फैलिन्छ कोरोना – Sanchar Patrika
नयाँ खुलासा ! मुख मात्रै हाइन, कानको माध्यमबाट पनि फैलिन्छ कोरोना
July 25, 2020 172
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी अहिले सारा विश्वमा व्याप्त छ । कोरोना भाइरसको कारण अहिलेसम्म विश्वमा ६ लाख ४२ हजार ८२९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक करोड ५९ लाख ४७ हजार ६४४ जनालाई संक्रमण भएको छ ।मानिसहरुलाई संक्रमण भएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी नै रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा ४४ जनाको मृत्युु भएको छ भने १८ हजार ३४७ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
ति मध्ये १२ हजार ९४७ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । वैज्ञानिकहरु कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सीन बनाउन अहोरात्र खटिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठूलो सफलता हात पार्न सकेका छैनन् ।यसैबीच शोधकर्ताहरु कोरोनाबारे एक नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरोना भाइरस आजसम्म नाक मुखको माध्यमबाट सर्ने भनिएपनि नयाँ शोधमा कोरोना कानको माध्यमबाट पनि सर्न सक्ने कुरा पत्ता लागेको हो । त्यसैले पनि अहिले कोरोनाले भयानक रुप लिएको बताइएको छ ।
मृतकको शरीरमा मिल्यो यो लक्षण
वैज्ञानिकका अनुसार कोरोना भाइरसलो मानिसको कान र मेस्टोयड हड्डीलाई पनि संक्रमण गराउन सक्छ । यसका तीन केस अमेरिकाका शोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका छन् । रिसर्चरका अनुसार तीन जना संक्रमित मृतकमा दुई कानमा र त्यो भन्दा पछाडिका भागमा पनि पाइएको हो ।
संक्रमितको कानमा पनि परीक्षण हुन आवश्यक
अमेरिकाका रिसर्चर जोन ह्ययापकिन्स स्कूल अफ मेडिसिन्सका शोधकर्ताका अनुसार कोरोनाको लक्षण देखिएका मानिसको कानको परीक्षण पनि हुनुपर्नेछ । कानबाट पनि शरीरका विभिन्न भागमा कोरोना पुग्ने शोधकर्ताहरुको भनाई छ । यसले नाक, गाला र फोक्सोमा असर गर्दछ ।तीन कोरोना संक्रमण पछि मृत्यु भएका मानिसमा गरिएको शोधमा यो कुरा पत्ता लागेको हो । एक पुरुष र दुई महिलाको शवमा यो शोध गरिएको थियो । उनीहरुको उमेर एक महिला र एक पुरुषको ६० र एक पुरुषमा ८० थियो ।
उक्त तीन जना मध्ये दुई वटा शवको कानमा संक्रमण पाइएको थियो । ८० वर्षकी एक महिलाको दायाँ कानमा र ६० वर्षको एक पुरुषको बायाँ कानमा भाइरसको संक्रमण फेला परेको थियो । जोन ह्यापिकिन्स अफ मेडिसिनको नयाँ रिसर्चमा शोधकर्ताहरुले कोरोनाबाटबच्नको लागि कान पनि ढाक्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै कोरोना परीक्षण गरेकाहरुको कानमा पनि परीक्षण हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
Prevविश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको पर्वतमा गरियो सफल परिक्षण, परिक्षण गर्दा देखिएको यो रमाइलो माहोल हेर्नुहोस् भिडियोमा
Nextकोहि गरीब भोको नरहोस भनि भगवान सँग प्राथना गर्छु : हिमानी शाह